အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Ningbo Bohao ဝါယာကြိုး & Cable Co. , Ltd.
Q:ဘယ်လိုလဲ လုပ်တယ် မင်း ထိန်းချုပ်မှု အဆိုပါ အရည်အသွေး?
A:မပြုမီ အဆိုပါ အမိန့် သို့ ဖြစ် အတည်ပြုလိုက်ပြီ လိုလိမ့်မည် စစ်ဆေးပါ အဆိုပါ ပစ္စည်း နှင့် အရောင် ၏ PVC/Rubဖြစ်r ပစ္စည်း အားဖြင့် နမူနာ ဘယ် သင့်တယ် ဖြစ် တင်းကြပ်စွာ အဆိုပါ အတူတူ အဖြစ် mအဖြစ်s ထုတ်လုပ်မှု။
Q: အကယ်၍ မင်း လက်ခံသည် OEM, OBM ဒါမှမဟုတ် ODM?
A:ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံသည် OEM, OBM ဒါမှမဟုတ် ODM, တရားမျှတ ခွင့်ပြုပါ ငါ့ကို သိတယ် မင်းရဲ့ အသေးစိတ် တောင်းဆိုချက်ကို။
Q:လုပ်နိုင်တယ် မင်း ထောက်ပံ့ရေး အခမဲ့ နမူနာ
A:ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တယ် မင်း လိုအပ်တယ် သို့ ပေးဆောင် ဘို့ အဆိုပါ ရထား တာဝန်ခံ။
Q:လုပ်နိုင် ငါ ရှိ တစ်ဦး sတစ်ဦးmple မှာထားလား
Q:ဘာ ဖြစ် အဆိုပါ ခဲ အချိန်?
A:နမူနာ လိုအပ်ချက်များ ၁-၃ ရက်ပေါင်း ပုံမှန်အားဖြင့် ပေးပို့ခြင်း ရက်စွဲ လိုလိမ့်မည် ဖြစ် ၂၅-၄၅ ရက်ပေါင်း နောက်မှ အမှာစာ၊ နှင့် အကယ် မင်း လိုအပ်တယ် တွင် မြန်မြန် တရားမျှတ တွင်form, ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင် ဆွေးနွေးပါ နှင့် ငါတို့ ထုတ်လုပ်မှု ဌာန။
Q:လုပ်ပါ မင်း ရှိ မဆို MOQ ကန့်သတ်?
A:ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည် 5000 pcs ဖြစ်သည်
ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း - FOB Shanghai သို့မဟုတ် Ningbo